Ifulethi elinamagumbi amabili okulala - 150m kude nolwandle!
Jabulela izinsuku ezinhle zehlobo lamaGreki uchitha iholide elingenakulibaleka endaweni eyingqayizivele yamafulethi amahle ayisikhombisa nezindlu ezimbili ezimangalisayo endaweni yasePorto Giardino yenkampani ye-zantehotels4u, esendaweni esogwini lwaseDrosia, amamitha ayi-150 nje ukusuka ogwini!
E-Pablo Boutique Apartments ungakhetha ifulethi eliziphekelayo elisezingeni eliphansi elikwazi ukuhlalisa izivakashi ezingaba ngu-5.
Leli fulethi linamakamelo okulala amabili, elinye linombhede ophindwe kabili kanti elinye linemibhede emibili eyodwa, kanti kungenzeka kube nombhede owodwa owengeziwe. Ifulethi ligcwaliswa ngendawo yokudlela enekhishi elifakwe izinto ezidingekayo nezitsha, kanye negumbi lokugezela elinethezekile elinobhavu wokugeza. Ifulethi elikhanyayo, eligcinwe kahle eline-air-conditioning yangasese futhi, ngaphezu kwalokho, uvulandi omuhle obheke endaweni eluhlaza evulekile, egcwele ukupholile okuvela kumoya ohelezayo woLwandle lwase-Ionian.
I-Giardino Resort itholakala edolobhaneni elihle laseKipseli, emaphandleni aluhlaza esiqhingini saseZakynthos, cishe amakhilomitha amathathu ukusuka eTsilivi, amakhilomitha ayi-11 ukusuka edolobheni laseZakynthos kanye ne-13 km ukusuka esikhumulweni sezindiza sesiqhingi. Ipharadesi elincane elinombono we-panoramic woLwandle i-Ionian, elizungezwe indawo eluhlaza ebabazekayo.
Amafulethi agcinwe kahle kanye nama-villas e-Giardino Resort anemibala yawo egqamile nejabulisayo, ngokushesha anikeza umuzwa wokungenisa izihambi njengoba ehlanganisa ukunethezeka nomuzwa womkhathi ojwayelekile futhi ozolile wasehlobo. Phakathi nalesi sikhathi amafulethi ayalungiswa kuyilapho umninikhaya u-Pigi, umphefumulo wenkampani i-zantehotels4u, ezinikele ekulungiseni, ekuhlobiseni nasekuwahlomiseni ukuze akujabulise ngokukhetha kwakho. Impela, umoya wakhe oshisekayo, ubuqiniso bokungenisa kwakhe izihambi, ukunakekelwa komuntu siqu okuhlanganiswe nokuthula kanye nezwe elihle eliluhlaza elizungeze i-Giardino Resort kuzokuvala ngokukhethekile ukuhlala kwakho kuleli hlobo!
Ukungena emnyango omkhulu, kwesokudla nakwesokunxele egcekeni elikhulu, uzothola izakhiwo ezimbili ezibamba amafulethi e-Giardino Resort. Ifulethi 'i-Pablo Boutique' igqame ngemibala eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, kanti eyesibili, 'Boukavilia' ihlukile ngemibala yemvelo yomhlaba.
Indawo yamahhala yokupaka izimoto zakho kanye ne-wi-fi yamahhala iyatholakala kuwo wonke amabhilidi e-Giardino Resort complex.
* Labo abafisa ukujabulela iholidi endaweni eyiqiniso yemvelo eduze nolwandle
* Labo abathanda ukuzenzela kanye nemfudumalo yomoya wokungenisa izihambi oyingqayizivele weZakynthian
* Labo abangathanda ukwazi okwengeziwe ngendawo yabo ngaphandle kokujabulela ulwandle olupholile nelanga elishisayo
* Labo abafuna imisebenzi eseduze nendawo yokungcebeleka yezivakashi enezinhlobonhlobo zokukhetha, kodwa ngesikhathi esifanayo bekude nomfutho nomsindo.
* Labo abafisa ukuchitha iholide elihle ngamanani athengekayo
*** Kithina lapha e-Zantehotel4u i-Giardino Resort Apartments and Houses complex ngokungangabazeki indalo yethu, iphupho eliye lafezeka: Izivakashi zethu zingabantu bethu abakhethekile futhi sinesifiso sokucebisa isipiliyoni sakho seholide ngomqondo we ukujwayelana, ukuthintana komuntu siqu nokunakekelwa. Yingakho sihlale sisebenza ngokuzinikela nangomdlandla. Usivuza ngokukhetha kwakho.
Indawo yaseDrosia kanye nezigodi zendabuko, iTragaki neKipseli, zaziwa ngamanzi azo ahlanzekile amaningi kanye nobuhle bemvelo. Akhiwe esiqongweni samagquma amabili, agqama ngokubukeka kwawo kanye namasonto amabili amahle kakhulu. Phakathi kwezihlahla zomnqumo, kunezivande zezithelo ezinezihlahla zewolintshi nekalamula eziniselwa amanzi amaningi entwasahlobo asendaweni kanye namasimu ezinhlobonhlobo ze-Zakynthian ezikhethekile zika-anyanisi onephunga elimnandi, elibizwa ngokuthi "ama-wateronion" noma "belusiotika". Ngaphezu kwalokho, le ndawo kufanele ikhombise idumela elakhiwa ngekhulu le-16 i-Enetician "Vardiola" (izindawo zokubuka izinqaba ezimise okwesikwele, lapho izakhamizi zazivame ukubuka ulwandle ngemikhumbi yezitha) ezibuka olwandle eduze nolwandle. Isonto elihle lika-Agios Charalambos kanye nethiyetha encane evulekile. Esigodini saseTragaki esinemihlobiso ewolintshi, isigodlo somlando se-"Panagia dermatoussa" sisendaweni egcwele izihlahla zikaphayini nemisindo yemvelo evumelanayo.
Eduze kakhulu ne-Giardino Resort, amathaveni amabili endabuko e-Zakynthian aphaka izitsha ezimnandi emini nakusihlwa. Indawo yokucima ukoma yomndeni "i-Roulis" iqhele ngamamitha angu-150 ukusuka kule ndawo, ngasogwini lolwandle, kanti indawo yokucima ukoma "Vardiola", iqhele ngamamitha angu-500 kuphela, ogwini oluyimfihlo olunegama elifanayo. Uzwa umoya ohelezayo wolwandle ngenkathi ujabulela ingilazi yewayini, uzonambitha kuwo womabili amathaveni ukunambitheka okubabazekayo, izinhlanzi ezintsha nazo zonke izimpahla zezwe laseZakynthian nolwandle oluphekwe ngendlela evamile. Ebhishi lase-Amboula indawo yokucima ukoma "Ladofanaro" ingesinye isiphakamiso esihle kakhulu sokudla kwasendaweni okumnandi endaweni yokungenisa izihambi, yasehlobo.
Endaweni edumile yaseTsilivi (3 km) egudla ulwandle ibheke edolobheni laseZakynthos, kunendawo yokudlela ebanzi njengoba izindawo zokudlela kanye nezindawo zokucima ukoma zisebenzisa izinhlobonhlobo zokudla kwamaGreki nezamazwe ngamazwe. Njengoba ilanga lishona, umoya omuhle, ojabulisayo wokuphila ebusuku nokuhamba kwenzeka. Noma kunjalo, eTsilivi kunezitolo eziningi zezipho, izingubo, ubucwebe kanye nazo zonke izinhlobo zezinsiza.
Izimpahla zokudla kanye nokuthenga okuvamile kwansuku zonke kungahlinzekwa yisitolo esikhulu kanye nebhikawozi elisemgwaqweni omkhulu, cishe amamitha angu-700 ukusuka ePorto Giardino.
Ezokuzijabulisa, Imicimbi, Imisebenzi
Thina, njengoba abantu bendawo sincoma:
* Jabulela ihlobo, ilanga elikhanyayo ogwini lolwandle lwase-Drosia, futhi uphole emanzini olwandle aluhlaza, acwebile e-Ionian.
* Nambitha izitsha ezimnandi ze-Zakynthian, ikakhulukazi izinhlanzi ezintsha nokudla kwasolwandle, okuphekwe ngezithako ezihlanzekile, zendawo emathaveni asendaweni yakini, i-Roulis ne-Vardiola.
* Vakashela usebe lolwandle olukhulu lwe-tsilivi olunesihlabathi esithambile namanzi olwandle angashoni, acwebezelayo azokhonzwa yizingane nabantu abadala, uvakashele yonke inhlobo yemidlalo yasemanzini njengokushushuluza kwendiza noma i-sea paragliding.
* Phuza isiphuzo esithambile noma ijusi epholile futhi ube nesidlo esiphundu esiphundu kwenye yezindawo eziningi zobumnandi zolwandle ngaphansi kwemisindo yomculo ojabulisayo wasehlobo owenza ukutshuza okupholile olwandle.
* Chitha usuku lokudlala futhi uphumule e-Splash Fun Tsilivi Water Park. Abangane bethu abasebasha bazojabula ngokukhethekile ngamaslayidi amahle alapho.
* Zama ikhono lakho legalofu futhi ujabule endaweni eklanywe ngokukhethekile ye-Fantasy Mini Golf eTsilivi.
* Zithokozise ebusuku kwenye yama-Coctail amangalisayo noma amabha omculo endaweni yaseTsilivi, lalela umculo nokudansa ngenkathi ujabulela ihlobo lamaGreki.
* Zama ukugibela amahhashi esikoleni sokugibela amahhashi esiseTsilivi noma ujabulele ukugibela okukhethekile endaweni, ulandele izindlela ezinhle ezihambisana nomfundisi.
* Vakashela "i-Milano Navy Museum" eTsilivi, lapho ungabona khona imibukiso yomlando futhi ufunde umlando omkhulu webutho lasolwandle lamaGreki phakathi namakhulu eminyaka.
Vala izindawo oya kuzo (ngemoto)
* Amadolobhana amahle aseTragaki naseKypseli, aseduze, aziwa ngokuba namanzi amaningi acwebile nobuhle bemvelo. I-landscape iwumbono omangalisayo ojabulisayo phakathi nokuhamba emigwaqweni enethunzi phakathi kwezihlahla zomnqumo kanye nendawo ephakathi kwamadolobhana anezakhiwo zendabuko ezibhalwe emibhoshongweni yezinsimbi zamasonto kanye nemigwaqo emincane ezungeze izindlu.
* Amabhishi ahleliwe e-Alykanas nase-Alykes enyakatho ngasogwini (7 km) futhi uchitha usuku lwakho uphumule futhi ubhukuda emanzini awo olwandle athandekayo, angashoni futhi apholile. Ziyindawo eyintandokazi yasehlobo kubo bobabili abantu bendawo kanye nezivakashi zakwamanye amazwe ezivakashela esiqhingini.
* Ipaki enkulu yokuzijabulisa yamanzi etholakala edolobhaneni elingumakhelwane laseSarakinado, elinemidlalo yasendlini nengaphandle, iwuhambo losuku oluyintandokazi kanye nenkundla yokudlala yezingane nabantu abadala.
* Idolobha laseZakynthos ebangeni elingu-11km lilungele ukuhambahamba ezigcawini kanye nomgwaqo osogwini. Vakashela amamyuziyamu futhi uyothenga emakethe emaphakathi ngemigwaqo yaseceleni emboziwe ethi "Kamares" ngolimi lwendawo. Inkampani yakwaZantehotels4u ikujabulele ukukunikeza amathikithi amahhala kanye nohambo oluqondisiwe "eSolomos Museum", etholakala eSaint Mark Square e "Hora" idolobha laseZakynthos kubantu bendawo, ukuze wazi isiko lesiqhingi sethu. .
* IBochali, igquma elingaphezu kwedolobha, linikeza isithombe esihle eningizimu yesiqhingi kuze kube seLaganas nogu oluphambene lwePeloponnese. Kukhona futhi i-Enetician Castle yaseZakynthos eyakhiwe ngesikhathi sokuba khona kwe-Enetician esiqhingini iminyaka engamakhulu amane. Ingqophamlando ethi "Hill of Stranis" yindawo lapho imbongi yesizwe u-D. Solomos yaphefumulela khona amazwi eculo lesizwe lesiGreek, kuyilapho iziqholo zendabuko "Razi" kusukela ngo-1963 nazo zingabonakala lapho.
U-Pigi kanye nabantu bakwa-Zantehotels4u bazokwamukela emndenini wabo omkhulu wasehlobo ngokumomotheka okumnandi, ukuba eduze kwakho kunoma yisiphi isidingo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngesimo sabo sengqondo sobungani nomusa bazokuzuza ngokushesha njengoba ngale ndlela beqinisekisa izimiso zempilo yabo nomsebenzi wabo.
U-Pigi kanye nabantu bakwa-Zantehotels4u bazokwamukela emndenini wabo omkhulu wasehlobo ngokumomotheka okumnandi, ukuba eduze kwakho kunoma yisiphi isidingo ngesikhathi sokuhlala k…